အိန္ဒိယ - မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးတွင် ဘာသာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု? - Yangon Media Group
အိန္ဒိယ – မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ဆက်ဆံရေးတွင် ဘာသာရေးနှင့် စီးပွားရေးဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှု?
ရန်ကုန်၊ ဧပြီ ၁ဝ
အိန္ဒိယ-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးတွင် ဘာသာရေးနှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များ ကူးလူးဆက်ဆံကူညီ ခြင်းများရှိပြီး ငလျင်ဒဏ်ကြောင့် ပျက်စီးခဲ့ရသည့် ပုဂံအာနန္ဒာဘုရား ပြုပြင်မွမ်းမံရေးတွင်လည်း အိန္ဒိယမှဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း သာသနာရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး ဦးကြည်မင်းကပြောသည်။ အဆိုပါပြောကြားချက်ကို ဧပြီ ၉ ရက်တွင် ဆူးလေရှန်ဂရီ လာဟိုတယ်၌ အိန္ဒိယသံရုံးမှ ပြုလုပ်သော အိန္ဒိယနိုင်ငံအစိုးရ၏ ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေး ကောင်စီ (ICCR) တည်ထောင်သည့်နေ့အခမ်းအနားတွင် မီဒီယာများအား ပြောကြားခဲ့သည်။
”အိန္ဒိယ-မြန်မာချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုကို ဘာသာရေးမှာရော၊ စီးပွားရေးမှာရော ဒီလိုပဲဆက် သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာ ရှိပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာအနီးစပ်ဆုံးအိန္ဒိယနိုင်ငံက ဘာသာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စရပ်တွေလည်းပဲကူးလူးဆက်ဆံကူညီနေတာရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ပုဂံမှာဆိုရင် ကြားတဲ့အတိုင်းပဲ ပြီးခဲ့တဲ့ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ငလျင်ဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ ဘုရားတွေ အာနန္ဒာဘုရားလိုမျိုးမှာလည်းပဲ အိန္ဒိယနိုင်ငံကလည်း ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေ တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကိုကြည့်လို့ ရှိရင်ဘာသာရေးမှာလည်း နှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိတယ်လို့ တွေ့ ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒုတိယဝန် ကြီးဦးကြည်မင်းကပြောသည်။
ပုဂံအာနန္ဒာစေတီတော်ကြီး အားပြန်လည်ထိန်းသိမ်းပြုပြင် ရေးလုပ်ငန်းများကို ဆောင်ရွက်ရာတွင် စေတီတော်ကြီး၏အ ဆောက်အအုံပိုင်းဆိုင်ရာကို ရေရှည်တည်တံ့ရန် ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့်ဓာတုဗေဒနည်းဖြင့် ကာကွယ်ထိန်းသိမ်းခြင်းဆိုင်ရာများကိုပါ ဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဧပြီ ၈ ရက်တွင် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အိန္ဒိယသံရုံးမှ ထုတ်ပြန်ထား ကြောင်းသိရသည်။ ယင်းအပြင် ကမ္ဘာအေးစေ တီတော်ကြီးသည် အိန္ဒိယ- မြန်မာ ချစ်ကြည်ရေးအတွက် အရေးပါ သောသမိုင်းဝင်စေတီတော်တစ် ဆူဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
”ကမ္ဘာအေးစေတီတော်ကြီးက အိန္ဒိယ- မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက် အရေးပါတဲ့သမိုင်းဝင် စေတီတော်ဖြစ်ပါတယ်”ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအိန္ဒိယသံအမတ်ကြီး H.E Shri Saurabh Kumar က အခမ်းအနားတွင်ပြောသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုလက်ထက်တွင် ကမ္ဘာအေးစေတီတော်ကြီးအတွက် အိန္ဒိယနိုင်ငံမှ ဓာတ်တော်၊ မွေ တော်များကိုဌာပနာနိုင်ရန် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုအား လှူဒါန်းခဲ့ဖူးကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ် မန်းသင်္ကြန် သံချပ်ပြိုင်ပွဲတွင် ''ရွှေလက်ညှိုး'' သံချပ်အဖွဲ့ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင်မည်
ခြေနှစ်ဖက် ဆုံးရှုံးလိုက်ရသော်လည်း ကမ္ဘာဆုံးအောင် လျှောက်မည့်သူ Stronger ရုပ်ရှင်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆီးချိုသွေးချိုဖြစ်ပွားသူ ခုနစ်သန်းကျော်အထိ ရှိလာနိုင်၊ အစားအသောက်မျာ?
ပြင်သစ်တွင် မီးလောင်မှုဖြစ်၊ ကလေးငါးဦး အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရ
လာ့စ်ဗီးဂတ် ပစ်ခတ်မှုကြောင့် ‘Blade Runner 2049’ ရုပ်ရှင်အထူးပွဲကို အစီအစဉ်ပြောင်းလဲ ကျင်းပမည်
မုံရွာမြို့နယ် အတွင်း မြို့အဝင် တိုးဂိတ် အခမဲ့ဖြတ်သန်းသွားခွင့် ကတ်များ ထုတ်ယူသူ နည်းနေ၊ ယ
ယောက်ျား တစ်ယောက်ကို အဒေါ်ဖြစ်သူနဲ့ ပြိုင်ချစ်ဦးမယ့် ပိုးအိအိခန့်